Cayn: Dagaallo kooban oo maanta dhacay iyo xiisad colaadeed oo saraysa. – Radio Daljir
Buuhoodle Feb 23 – Dagaal saacado kooban socday ayaa la sheegay in uu maanta ka dhacay balliyada Hagoogane, Maygaagle iyo Kalshaale oo ay isku hor-fadhiyaan ciidamada Somaliland iyo ciidama-beeleedka gobolka Cayn ee Puntland. Dagaalka oo la isku adeegsaday madaafiic socdayna muddo laba saac ah inta la ogyahay wax khasaare ah ma uunan gaysan.
Dagaalka ayaa lagu soo waramayaa in ay bilaabeen ciidamada Somaliland kadib markii ay madaafiic kusoo rideen goobihii ay ku sugnaayeen ciidama-beeleedka Cayn kuwaa oo markoodana ugu jawaabay madaafiic kale. Ma jirin dagaal fool-ka-fool ah maanta, waxase la dareemayaa saansaan colaadeed iyo diyaar-garoow aad u muuqda oo ka jira labada dhinac.
Waxa xiran dhammaan isku socodka degaanka iyo ganacsiga mana jiraan wax waan-waan ah oo la isku dayayo in lagu qaboojiyo colaadda labada dhinac. Culumaa’udiinka gobalka Cayn ayaa ugu baaqay maamulka Somaliland in ay joojiyaan dagaalka dibna ula baxaan ciidankooda weerarka ah. Shalay ayay nabaddoonnada gobolka Bari ee Puntland waxa ay sidoo kale ugu baaqeen Somaliland in ay joojiso colaadda ciidankeedana dib ula baxdo si loogu gudbo marxalad wadahadal.
Madaxwaynaha Puntlnad Cabdiraxman Maxamed Faroole oo si wayn horay loogu dhaliilay sida uu u maareeyay xaaladaha dagaalka Sool iyo Cayn ayaa dhawaan waraysi uu siiyay saxaafadda waxa uu farriin lahjad kulul u adeegsaday u diray maamulka Somaliland isaga oo ka codsday in ay joojiyaan weerarka, xabaalaan barkadaha degaanka laga qoday dabadeedna isga baxaan dhammaan degaannada ay ka joogaan gobollada Cayn iyo Sool. Waxa uu sheegay in haddii ay sidaa yeeli waayaan ay Puntland ku khasban tahay in ay dalka iyo dadkaba difaacdo.